ToutApp: Raadinta iibka, Moodooyinka iyo Falanqaynta | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 3, 2013 Sabtida, Diisambar 12, 2015 Douglas Karr
Hay'ada weyn ee iibka, wakiilada iibka ee banaanka waxay leeyihiin mowqif aan la cabirayn oo ah inay la xiriiraan duubabka hogaamiyaasha mararka qaarkood si ay ula xiriiraan kuwa hal ama labo rajo ah oo badalaya. Nidaamyada otomaatiga suuq-geynta cusub sida kafaala-qaadeheena Xaqa Isdhaxgalka maaraynta dhibcaha hogaanka iyo kobcinta isgaarsiinta dadweynaha, laakiin shaqaalaha iibka wali waxay u baahan yihiin inay soo saaraan emaylladooda 1: 1 si ay ula xiriiraan shaqsiyan hoggaankooda.
oo dhan waa madal dardargelinta iibka oo ka caawisa kooxdaada iibka inay si dhakhso leh u qoraan emayllada, raadinta kaqeybgalka iyo xiro heshiisyo badan. Tout wuxuu la shaqeeyaa qalabkaaga jira oo ay ka mid yihiin Gmail, Muuqaalka, iyo Iibka.
Quudin Toos ah - Ma aha oo kaliya inaad la socon karto aragtida, qasabadaha iyo jawaabaha, waxaad tallaabo toos uga qaadi kartaa Quudintaada Tooska ah. Hal guji, samee wicitaan, emayl emayl ama arag CRM xogta hal meel oo dhan.
Raadinta Emailka - Hel aragti-waqtiga dhabta ah ee ku saabsan waxa ku dhacaya emaylladaada. Ogow marka qof fiiriyo, dhagsiiyo ama u jawaabo emayl.
Raadinta Websaydhka - Ka fikir aragtidaada waxa aad rajaynayso. Mar haddii rajadu ay ku xirnaato xiriiriye xagga emailkaaga ah, waad ogaan doontaa goorta ay booqanayaan websaydhkaaga, bogga qiimeynta ama Xarunta Caawinta intaa ka dib.
Lasocodka Lifaaqa - Raadinta Lifaaqa, waligaa mugdi lagagama tegi doono. Eeg haddii rajadu ay furatay lifaaqaaga, iyo bogagga ay eegeen.
Ku Isticmaal Tout Gudaha Macaamilka Emailkaaga - Waxaad ka isticmaali kartaa Tout barnaamijkeena ku saleysan shabakada, barnaamijkeena mobilada, CRM-kaaga ama xitaa gudaha Macaamiisha Emailka Gmail iyo Muuqaalka.
Wuxuu ku dhexjiraa Salesforce iyo CRMs kale - Tout wuxuu si toos ah isugu daraa Salesforce, Highrise, CapsuleCRM iyo Batchbook, wuxuu waafajiyaa xiriiradaada wuxuuna si otomaatig ah hawshaada u hayaa.
Tags: isgaarsiinta iibkaemaylka iibkaKordhinta Iibkaoo dhantoutapp
Naqshadaynta Codsiga Mobilada ee Wanaagsan